मनोरञ्जन Archives - Page2of 153 - Nagarik Sandesh
वरिष्ठ अभिनेता बीएस राणा रहेनन्
3 weeks ago	मनोरञ्जन Comments Off on वरिष्ठ अभिनेता बीएस राणा रहेनन्
काठमाडौ । वरिष्ठ अभिनेता बीएस राणाको निधन भएको छ । ७८ वर्षको उमेरमा उनको शुक्रबार बिहान निधन भएको हो । स्वासप्रस्वासमा समस्या आएपछि उनी करीब एक हप्ताअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए । अन्तिम समयमा उनको मुटुमा समस्या देखिएको थियो । उनको शुक्रबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि भएको छ । नरेन्द्रशम्सेर …
‘यात्रा’ टिजर आयो, सलोनको कस्तो भूमिका ?
3 weeks ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on ‘यात्रा’ टिजर आयो, सलोनको कस्तो भूमिका ?
काठमाडौं । अभिनेता सलिनमान बनियाँ स्टारर फिल्म ‘यात्रा’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । झरना थापा निर्देशित फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ बाट अभिनय करियर थालेका सलिनमानको उक्त फिल्मको टिजर बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको हो । टिजरमा अभिनेता सलिनमान र नवअभिनेत्री मल्लिका महतको प्रेमलाई देखाइएको छ । …
‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनद्धारा तीन अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने
3 weeks ago	मनोरञ्जन Comments Off on ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनद्धारा तीन अर्बमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने
काठमाडौं । कलाकारद्धय सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ को गैर नाफा मुलक सामाजिक संस्था ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन’ ले तीन अर्ब लागतमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने भएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच फाउण्डेशन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको …
नाजिर र शिल्पाको ‘कागजपत्र’
3 weeks ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on नाजिर र शिल्पाको ‘कागजपत्र’
काठमाडौं । फिल्म ‘कागजपत्र’ को पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । मंगलवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच निर्माण टिमले ‘माया संसार….’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो गीतमा हर्कुलस बस्नेतको स्वर छ । गायक स्वयंको शब्द रहेको गीतले प्रेम जोडीको प्रेम र पीडा बोल्छ । नाजिर हुसेन र शिल्पा मास्के प्रेम जीवन …
मायामा अल्झे शुशील र सुवेक्षा (भिडियोसहित)
4 weeks ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on मायामा अल्झे शुशील र सुवेक्षा (भिडियोसहित)
काठमाडौं । एक्सन–(लभस्टोरी फिल्म ‘रणवीर’ को रोमान्टिक गीत इन्टरनेट रिलिज भएको छ । ‘मायामा म’ बोलको सार्वजनिक गीतमा हर्कुसल बस्नेत र प्रविशा अधिकारीको स्वर सुन्न सकिन्छ । गीतमा गायक बस्नेत स्वयंको शब्द तथा संगीत छ । माघ १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन तयार रहेको फिल्मको सार्वजनिक गीतको भिडियोमा फिल्मका लिड अभिनेता …
क्यूज हल बहिष्कार गर्ने चलचित्र पत्रकार संघको चेतावनी, हलले माग्यो माफी
4 weeks ago	मनोरञ्जन Comments Off on क्यूज हल बहिष्कार गर्ने चलचित्र पत्रकार संघको चेतावनी, हलले माग्यो माफी
काठमाडौं । चलचित्र पत्रकार समिर बलामीमाथि भएको दुव्र्यवहारप्रति चलचित्र पत्रकार संन नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार दिउँसो करीब साढे ४ बजे फिल्म ‘शुभ लभ’ को शिर्ष गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका चलचित्र पत्रकार तथा चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका सचिव समिर बलामीमाथि क्यूज हलका कर्मचारीबाट भएको …
ज्योतिषको नायिकासंग मोजमस्ती (भिडियोसहित)
4 weeks ago	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on ज्योतिषको नायिकासंग मोजमस्ती (भिडियोसहित)
काठमाडौं । युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीले नायिकासंग मोजमस्ती गरेका छन् । हरिहरले हिरोको रुपमा डेब्यु गरेको लभस्टोरी फिल्म ‘शुभ लभ’ को टाइटल गीत सार्वजनिक भएको छ । पोखरामा खिचिएको गीतमा हरिहर आफ्नी प्रेमिका (कृष्टिन पौडेल) लाई फकाउँदै देखिएका छन् । गीतमा निशान भट्टराई र मिना सिंहको स्वर छ । रियल …
बिहे भइसकेर पनि भन्दैछिन् प्रियंका – तिम्रै छेउँ सरुँ कि म…
January 22, 2019	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on बिहे भइसकेर पनि भन्दैछिन् प्रियंका – तिम्रै छेउँ सरुँ कि म…
काठमाडौं । आयुष्मान देशराज जोशीसंग बिहे भइसकेपछि प्रियंका कार्कीलाई उनीसंग नजिकिने के नै पो बहाना बाँकी होला र । तर दुवै अभिनित फिल्म ‘प्रेम दिवस’ को गीतमा भने तिम्रै छेउँ सरुँ कि म भन्दै उनकै भर पर्न खोजेकी छिन् प्रियंका । फिल्मको पहिलो गीत युट्युबमा रिलिज भएको छ । सोमवार …
‘कति खसे आँखाबाट…..’ सार्वजनिक
January 21, 2019	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on ‘कति खसे आँखाबाट…..’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । अनिल श्रेष्ठ, रक्षा श्रेष्ठ, कृष्णराज र अनिल श्रेष्ठले खेलेको भिडियो यतिबेला चर्चामा छ । गायक राज हृदय गणेशको ‘कति खसे आँखाबाट’ गीतको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएको हो । गीत युट्युबमार्फत् सार्वजनिक गरिएको गीतमा गायक राजको गीत र कलाकारत्रयको भावबीच निकै तालमेल मिलेको छ । लालबहादुर सुब्बाको शब्द रचना …
आयो ‘दि ब्रेकअप’ ट्रेलर
January 21, 2019	भिडियो, मनोरञ्जन Comments Off on आयो ‘दि ब्रेकअप’ ट्रेलर
काठमाडौं । हेमराज विसी निर्देशित नयाँ फिल्म ‘दि ब्रेकअप’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सोमवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच पत्रकारलाई साक्षी राखेर निर्माण टिमले कलरफुल ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो । ट्रेलरमा फिल्मका लिड कलाकारद्वय आशिरमान देशराज जोशी र शिल्पा मास्केबीचको प्रेम, रोमान्स र विछोडलाई देखाइएको छ । ट्रेलरमा …